बि.सं.२०७४ साल साउन १ गते आइतवारको राशिफल
नेपाली मितिः वि.सं. २०७४ । नेपाल सं. ११३७ । योग सं. ३८ । साउन महिनाको १ गते आइतवार ।
अँग्रजी मितिः ई.सं. २०१७ जुलाई महिनाको १६ तारिख ।
योगः अतिगण्ड योग, ०५ः३१ बजेपछि सुकर्मा योग ।
तिथीः ग्रीष्म ऋतु श्रावण कृष्णपक्षको सप्तमी तिथी,०९ः४० बजेपछि अष्टमी तिथी ।
नक्षत्रः रेवती नक्षत्र, २१ः२२ बजेपछि अश्विनी नक्षत्र ।
करणः बव करण ०९ः४० बजेसम्म उपरान्त बालव करण ।
चन्द्रमाः मीन राशिमा, २१ः२२ बजेपछि मेष राशिमा ।
राहुकालः १७ः१६ बजेपछि १८ः५९ बजेसम्म ।
मेष राशि हुनेहरुको लागि आज दिन प्रतिकूलता बढ्नसक्ने खालको गोचर परेको छ । कामकार्यमा बढी हतार नगर्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ अन्यथा खर्च बढ्ने सम्भावना रहनेछ । विषय तथा कार्य नबुझि अघि बढ्नाले पश्चाताप पर्नसक्ने छ, ख्याल गर्नु होला । केही संघर्ष एवं प्रतिकूलताको बाबजुत सोँच एवं योजना नभएको तर्फबाट आकस्मिक आयआर्जन तथा उपलब्धि हुनसक्ने छ । देशविदेशको यात्रा हुनसक्ने छ । दानदातव्य एवं मान्यजनको दर्शनभेट आदिको लागि पनि दिन उपयुक्त रहेको छ । आज यहाँलाई रातो रङ्ग, पाँच अङ्कको उपयोग र भगावन श्री सूर्यनारायणको श्रद्धाभक्ति गर्नु विशेष शुभकर हुनेछ ।
वृष राशिका व्यक्तिहरुको लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ । आयआम्दानी बढ्ने तथा उद्यमव्यवसायको विकास हुनेछ । कसैकसैलाई कैफियत युक्त आम्दानीतर्फ पनि मन आकर्षित नहोला भन्नसकिन्न । मनलाई संयम गर्न नसकेमा त्यसको परिणाम पछुतोजन्य आउनसक्ने सम्भावना छ । सामान्यतया आफ्नो कामकार्य तथा पेशामा सकारात्मक विचारपूर्वक अघि बढ्नेको लागि दिन उपलब्धिमूलक रहनेछ । आफन्तीहरुसँग भेट्घाट हुन र व्यवहारिकता निर्वाह गर्न पर्नेछ । स्वजनको शुभसमाचार सुन्न पाइने छ । आज यहाँको लागि २ अङ्क, सेतो रङ्गको प्रयोग अनुकूल रहनेछ भने सूर्य भगवानको श्रद्धाभक्ति गर्नु कल्याणप्रद हुनेछ ।
मिथुन राशिका व्यक्तिहरुको लागि आज अपेक्षित उपलब्धि हुननसके पनि जनसंपर्क बढ्ने र तुलनात्मक रुपमा केही सहजवातावरण सृजना हुनेछ ।कामकार्य तथा पेशा वा व्यवसायको क्षेत्रबाट आंशिकलाभ पनि हुनेछ । जसले गर्दा केहीहद्सम्म मानसिक सन्तुष्टि मिल्ने र साहस बढेर आउनेछ । तुरुन्तै फल प्राप्त गर्न नसकिएपनि केही महत्त्वाकांक्षी योजनाको बारेमा मानसिक चिन्तन तथा सरसल्लाह एवम् विचारविमर्श हुनसक्नेछ । मानसम्मान पाइने र भविष्यको लागि आश्वासन पनि मिल्नसक्ने छ । आशा गरेकै जति नभएपनि औकात अनुसारको पदप्रतिष्ठा र जिम्मेवारी मिल्नसक्ने छ । आज यहाँलाई गुरुजनको आर्शिवाद लिएर अघिबढ्नु शुभकर हुनेछ ।
कर्कट राशिका व्यक्तिहरुको लागि आजको दिन केही ब्याबधानको बाबजुत पूण्यार्जन गर्ने अवसर मिल्ने ग्रहगोचर परेको दिन रहेको छ । अध्यात्मिक तथा आस्तिक भावना बृद्धि हुने र धार्मिक कार्य सम्पादन गर्नसकिने छ । व्यवसायिक उन्नति पनि हुन गइ आर्थिक लाभ पनि गर्नसकिने छ । सांसारिक पुरुषार्थ गर्न पनि सक्नुहुने छ । यात्रायोजना एवम् नयाँ कार्यको थालनीको सम्भावनालाई पनि ग्रहले लक्षित गरिरहेको देखिन्छ । आँटेको काममा थप आत्मबलको साथमा अघि बढ्दा हुनेछ । नौ अंक पहेलो रंगको उपयोग र धार्मिक जनको सेवा अझ विशेष हितकर हुने देखिन्छ ।
सिंह राशि हुनेहरुको लागि आज दिन विपरित रहेको छ, स्वास्थ्यमा समस्या देखिने तथा ईज्जत–प्रतिष्ठामा चुनौती थपिने र खर्च बढ्नसक्ने छ । कार्यमा विघ्नबाधा आइपर्ने, शत्रु सल्बलाउने जस्तो प्रतिकूलता आइपर्न सक्नेछ । आफ्नै बुद्धिले दुःख पाइनसक्ने पनि ग्रहगोचरले देखाइरहेको छ तसर्थ व्यवहारिक तरिकाबाट सजगता अप्नाउनु बुद्धिमानी हुनेछ । आत्मबल बढाएर संघर्ष गर्नाले अन्तिममा सफलता मिल्नेछ । कार्यक्षेत्रमा अल्लि बढी परिश्रम गर्दा केही उपलब्धि आर्जन गर्न सकिएला । रोगी तथा दीनदुखीको सेवा सहयोगमा समयको सदुपयोग गर्नाले ग्रहको प्रतिकूलदोषलाई न्यूनिकरण गर्न मद्दत हुनेछ ।
कन्या राशि हुनेहरुको लागि आजको दिन भौतिक उन्नतिप्रद गोचर परेको दिन छ । पेशागत क्षेत्रमा चहलपहल बढ्नेछ, उद्यमधन्दा प्रति चेष्टा बढ्नेछ । व्यवसायबाट राम्रै उपलब्धि एवं सफलता र लाभ हासिल गर्नसकिनेछ । टाढाको खबर मिल्ने, औपचारिक कार्यमा व्यस्त रहनुपर्ने, विशेष व्यक्तित्त्वहरुसँग भेट्घाट हुनसकिने छ । प्रेम तथा दाम्पत्यजीवनमा सुख बृद्धिहुने, विलासी–प्रमोदी दिनचर्या रहने, रमाइलो यात्राको संयोग पर्नसक्ने छ । सामान्य दैनिकी कार्यमा पनि व्यापारजन्य कर्म सम्पादन हुन जाने सम्भावना छ । सात अङ्क, सेतो रङ्गको उपयोग र साहित्यिक सन्दर्भ यहाँको लागि आज शुभप्रद हुनेछ ।
वृश्चिक राशिहुने व्यक्तिहरुको लागि आजको दिनलाई सुधारोन्मुख मान्न सकिन्छ । कुनै कुनै क्षेत्रमा आक्रोश एवं रणनीतिक भूमिका निर्वाह गर्नुपरे पनि विद्याविनयता र तर्कबलजन्य प्राज्ञिककर्ममा सफलता एवं नीतिगत कार्यमा सम्मान मिल्नेछ । कुट्नैतिक कार्य तथा प्रस्तुतिमा सफलता र प्रशंसा पाइने छ । ज्ञानोन्नतिकारक गोचर परेकोले विद्यार्थीहरुमा विद्याबुद्धि बढ्ने तथा विद्यार्जनमा सफलता हात लाग्नेछ । सैद्धान्तिक छलफल र अर्तिउपदेश जन्य वातावरणको संयोग जुट्न सक्नेछ । कसैकसैलाई सन्तानको बाटोबाट चिन्तित हुनपर्ने कुरालाई भने नकार्न सकिन्न । मानसिक नैराश्यता हट्ने र व्यवसायिक क्षेत्रबाट लाभ रसफलता मिल्ने छ । आज यहाँले भगवान सूर्यनारायणको दर्शन भक्ति गर्नु भाग्यप्रद हुनेछ ।
धनु राशि हुनेहरुको लागि आजको दिन अल्लि सजग रहनपर्ने दिन देखिएको छ । ख्यालख्यालमै कसैसँग विवाद हुन पनि सक्नेछ ख्यालपुर्याउनु होला । मानसिक संकिर्णता बढ्नसक्ने तथा आफ्नै बुद्धिकोकारण पछुतो पर्ने पनि हुनसक्ने छ । पारिवारिक जिम्मेवारी थपिनेतथा अभाव सृजना हुनसक्ने जस्ता संघर्षको संकेत पनि गोचरले देखाइरहेको छ । जसलाई सकारात्मक तरिकाले सामाना गर्ने मानसिक बल बनाएर तयारीमा बस्नु उपयुक्त हुनेछ । केही आलोेचना पनि आउनसक्नेछ सहन गर्ने शक्ति बढाउनु होला । आज यहाँलाई चार अंक, सेतो रङ्गको प्रयोग शुभ हुनेछ भने मातृशक्तिबाट आर्शिवाद लिनु हितकर हुनेछ ।
मकर राशिहुने व्यक्तिहरुको लागि आजको दिन हिम्मतिलो र सक्रियभूमिका हुँदाहुँदै पनि मुख्य काममा अपेक्षा गरेबमोजिम फल नपाइने हो कि भन्ने शङ्का देखिएको छ । तथापि ठूलो परिणाममा नभएपनि केही उपलब्धि भने हुनेछ । आज गर्नै खोजेको कार्यलाई मान्यजनको अनुमति नमिल्न पनिसक्ने कुरालाई नकार्न सकिन्न । बा“की पक्षमा उत्साह–उमङ्गिलो दिन मान्नसकिन्छ । स्वजनबाट सहयोग मिल्ने र प्रतिस्पर्धामा विजय भइने छ । सामान्यतया आकस्मिक लाभ एवं प्रख्याति मिल्नेछ । आज गुरुजनको आर्शिवाद लिनु, श्रमिक वर्गको हितमा काम गर्नु अथवा सहयोग गर्नु वा उनीहरुलाई खुशी बनाउनुले मुख्यकाममा आउने अबरोध निवारणको लागि मद्दत गर्नेछ ।
कुम्भ राशिका व्यक्तिहरुको लागि आजको दिन सकारात्मक नै देखिएको छ । प्रत्यक्ष रुपमा आलोचना भएपनि अप्रत्यक्ष रुपमा बोलीवचनको प्रभावले मान्छेहरुको मन जित्न सकिनेछ । व्यवसायिक कार्यमा प्रगति र आर्थिक सुधार हुन गई कोष बृद्धि हुनेछ । परोपकार एवम् समाजसेवाका कार्यमा पनि सरिक हुने मौका मिल्नसक्ने छ । नाता–कुटुम्ब सम्बन्ध विस्तार हुनेछ । कलासंगीतकर्मीको लागि दिन विशेष सफलता दिने खालको रहेको छ । आज यहाँको लागि दुई अंक, सेतो रंग उपयुक्त रहने छ भने मान्यजनको सेवा गर्नु तथा सल्लाहसुझाव लिनु हितप्रद हुनेछ ।
मीन राशिका व्यक्तिहरुको लागि आजको दिन संयमता अप्नाउनाले शारीरिक आकर्षण एवम् मानप्रतिष्ठा बढ्नेछ भने मिठो खानेकुरा प्राप्ति हुनसक्ने छ । व्यवसायबाट धनलाभ एवं भौतिक सुख र आफन्तजनबाट प्रशंसा प्राप्ति हुनेछ । अभिष्टकार्यमा सफलता मिल्नसक्ने गोचर रहेको छ, ईच्छित कार्य पूर्णताको लागि दृढताको साथमा अगाडि बढ्नसक्नु हुनेछ । सामाजिक जिम्मेवारी थपिनसक्ने छ । मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम आदिमा पनि सरिक हुन पाइनसक्ने छ । नयाँलगानीको प्रस्ताव आउनसक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ । आज यहाँलाई एक क्रमसँख्या, रातो रङ्गको प्रयोग एवम् भगवान गणेशको साधना बढाउनु शुभप्रद हुनेछ ।